February 2017 - ဗေဒင်ဝါသနာအိုး
ချစ်သူ/ လင်နှင့်မယား ဇနီးမောင်နှံတို့ ရာသက်ပန် ဘဝဘဝဆက်တိုင်းပြန်လည်ဆုံဆည်းပေါင်းဖက် ဆုံဆည် လို လျှင်
သံသုမာရဂီရီပြည် ဘေသကဠ တောအုပ်၌
နေတော်မူစဉ် အဲ့ဒီအချိန်မှာ နကုလပီတာ
သည် ဘဝ ဘဝဆက်တိုင်း ပြန်လည်ပေါင်းဖက်
၁။ သမသဒ္ဓါ – သဒ္ဓါတရားချင်းတူညီရမယ်.
၂။ သမသီလာ – အကျင့်သီလချင်းတူညီရမယ်.
၃။ သမစာဂါ – စွန့်ကြဲပေးကမ်းတာချင်းတူညီရမယ်
၄။ သမပညာ – ကောင်းသောအယူအဆ အတွေး
ကံ ကံ ၏ အကျိုးကို အတူတကွယုံကြည့်ပါ ။
သီလတရားတွေလဲ စောင့်ထိန်းပါ ။
စိတ်တူကိုယ်တူ အတူလှူဒါန်းပါ ။
ဤတရား ( ၄ ) ပါးနှင့်နားလည်မှု့ရှိစွာ
နေထိုင်ပေါင်းသင်းလျှင် ဘဝ ဘဝဆက်တိုင်း
မခွဲအတူ ရှိနေမှာလို့ နကုလပီတာ ဇနီးမောင်နှံ
Credit; Ashin Piya Bago‎
ခဈြသူ/ လငျနှငျ့မယား ဇနီးမောငျနှံတို့ ရာသကျပနျ
ပေါငျးဖကျ ဆုံဆညျ လို လြှငျ
သံသုမာရဂီရီပွညျ ဘသေကဠ တောအုပျ၌
နတေျောမူစဉျ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ နကုလပီတာ
သညျ ဘဝ ဘဝဆကျတိုငျး ပွနျလညျပေါငျးဖကျ
၁။ သမသဒ်ဓါ – သဒ်ဓါတရားခငျြးတူညီရမယျ.
၂။ သမသီလာ – အကငျြ့သီလခငျြးတူညီရမယျ.
၃။ သမစာဂါ – စှနျ့ကွဲပေးကမျးတာခငျြးတူညီရမယျ
၄။ သမပညာ – ကောငျးသောအယူအဆ အတှေး
ကံ ကံ ၏ အကြိုးကို အတူတကှယုံကွညျ့ပါ ။
သီလတရားတှလေဲ စောငျ့ထိနျးပါ ။
စိတျတူကိုယျတူ အတူလှူဒါနျးပါ ။
ဤတရား ( ၄ ) ပါးနှငျ့နားလညျမှု့ရှိစှာ
နထေိုငျပေါငျးသငျးလြှငျ ဘဝ ဘဝဆကျတိုငျး
မခှဲအတူ ရှိနမှောလို့ နကုလပီတာ ဇနီးမောငျနှံ
လက် (၄) မျိုးထဲက ဘယ်လက်ပိုင်ရှင်လဲ
သင်က ဘယ်လက်ဖြစ်နိုင်လဲ ကြည့်ရအောင်
စတုရန်းပုံသဏ္ဍာန် လက်ဖဝါးနဲ့ ထောင့်မှန်စတုဂံ ပုံသဏ္ဍာန် လက်ဖဝါး ဆိုပြီး (၂) မျိုး ရှိပါတယ်။ လက်ချောင်းတွေဆိုရင်လည်း တိုတာနဲ့ ရှည်တာဆိုပြီး (၂) မျိုး ရှိပါတယ်။ ဒီ (၂) မျိုးစီကို တွဲဖက်ကြည့်လိုက်ရင် လက်ပုံစံ (၄) မျိုး ထွက်လာပါတယ်။
(၁) စတုရန်းပုံ လက်ဖဝါးရှိပြီး လက်ချောင်းလေးတွေက တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ဆိုရင် သင့်လက်က ပထဝီဓာတ် စိုးမိုးတဲ့ မြေလက် ဖြစ်ပါတယ်။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဘဝကို ရင်ဆိုင်နေတဲ့သူပါ။ လက်တွေ့ ကျတယ်။ အောက်သက်ကျေပြီး ဘယ်လောက် အောင်မြင်၊ အောင်မြင် ဘဝင် မမြင့်တတ်ကြပါဘူး။ ခံစားချက် ပြင်းထန်သူတွေ ဖြစ်ပေမယ့် တုန်လှုပ်တဲ့ ပုံစံလုံးဝ မပြဘူး။ သံယောဇဉ် ကြီးတယ်။ တွယ်တာ တတ်တယ်။ ဖင်တော်တော်နဲ့ မကြွချင်ကြဘူး။ ပြောင်းလဲမှုတွေကို သိပ်မကြိုက်ဘူး။ နေရာ၊ ဒေသ၊ အသစ်၊ အစီအစဉ် အသစ်တွေ ပြောင်းသွားတာတွေကို မုန်းတတ်ကြတယ်။ စာဖတ်လေ့လာရတာကို နှစ်သက်ပြီး အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်တကျ စဉ်းစားလေ့လာသူ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက် ဘာကို ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကို သိနေပြီး ရည်မှန်းချက်အတွက် ဦးတည်ပြီး လျှောက်လှမ်းနေသူပါ။
(၂) ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ လက်ဖဝါးရှိပြီး လက်ချောင်းလေးတွေက ရှည်ရှည်သွယ်သွယ်နဲ့ဆိုရင် သင့်လက်က အာပေါဓာတ် စိုးမိုးတဲ့ ရေလက် ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောကောင်းပြီး ခံစားချက်တွေနဲ့ အသက်ရှင်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းက ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ ကူညီရန် အသင့် ရှိတတ်ပြီး ခံစားသိနိုင်စွမ်းအလွန် မြင့်မားတယ်။ တစ်ယောက်တည်း ခံစားမှုအမျိုးမျိုး ခံစားနေရတတ်တယ်။ အရမ်းအစွဲအလမ်းကြီးတယ်။ မြင်မြင်သမျှ လူတွေကို ချီးကျူးတတ်တယ်။ စိတ်လွင့်နေတတ်တာများတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ အယူသီးတတ်တာမို့ သိပ်အပေါင်းအသင်းမရှိဘူး။
(၃) စတုရန်းပုံ လက်ဖဝါးရှိပြီး လက်ချောင်းလေးတွေက ရှည်ရှည်သွယ်သွယ်နဲ့ဆိုရင် သင့်လက်က ဝါယောဓာတ် စိုးမိုးတဲ့ လေလက် ဖြစ်ပါတယ်။ အကြံဉာဏ်တွေ ပတ်ချာလည်ဝိုင်းနေတဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင်လေးပါ။ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ပြီး ဥာဏ်ရည် ထက်မြက်တယ်။ လူအများရဲ့ ချစ်ခင်လေးစားခြင်းကို ရရှိသူတစ်ယောက်ပါ။ နှစ်ဦး နှစ်ဖက် အဆင်ပြေအောင် ညှိပေး၊ ပြောပေးတတ်တယ်။ အတွေးခေါင်ပြီး ဟိုဆိုဒီရောက်တတ်တယ်။ အချိန်တိုင်း အိုင်ဒီယာအသစ်တွေနဲ့ ပျော်နေတတ်တယ်။
(၄) ထောင့်မှန်စတုဂံပုံ လက်ဖဝါးရှိပြီး လက်ချောင်းလေးတွေက တိုတိုတုတ်တုတ်နဲ့ဆိုရင် တေဇောဓာတ် စိုးမိုးတဲ့ မီးလက် ပိုင်ရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ လက်အဆစ်က ကြီးရင် ကြီးသလောက် ခေါင်းမာတယ်။ စိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။ မာန ကြီးတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် အလွန် မြတ်နိုးသူဖြစ်ပြီး အသစ်အဆန်းတွေကို ဖန်တီးနိုင်တယ်။ စိတ်မြန်လက်မြန်ရှိတာမို့ စောင့်ဆိုင်းရမယ်ဆိုရင် တစ်မိနစ်တောင် စိတ်မရှည်ဘဲ ဒေါပွတတ်သူပါ။ သနား ကြင်နာမှု မရှိဘူး။ ဘဝတစ်လျှောက် နွေးထွေးမှုနဲ့ ဘဝရဲ့ အရသာကို သေချာမသိကြဘူး။ အားသာချက်က ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါမှာ တွေဝေမှု တစ်စိကလေးမျှ မရှိပါ။ အနုပညာမြောက်သော ပင်ကိုယ်အတွေးတွေ ရှိပြီး အကြံအစည်တွေကို အကောင်အထည်ပေါ်အောင် တီထွင်နိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
လကျ (၄) မြိုးထဲက ဘယျလကျပိုငျရှငျလဲ
သငျက ဘယျလကျဖွဈနိုငျလဲ ကွညျ့ရအောငျ
စတုရနျးပုံသဏ်ဍာနျ လကျဖဝါးနဲ့ ထောငျ့မှနျစတုဂံ ပုံသဏ်ဍာနျ လကျဖဝါး ဆိုပွီး (၂) မြိုး ရှိပါတယျ။ လကျခြောငျးတှဆေိုရငျလညျး တိုတာနဲ့ ရှညျတာဆိုပွီး (၂) မြိုး ရှိပါတယျ။ ဒီ (၂) မြိုးစီကို တှဲဖကျကွညျ့လိုကျရငျ လကျပုံစံ (၄) မြိုး ထှကျလာပါတယျ။
(၁) စတုရနျးပုံ လကျဖဝါးရှိပွီး လကျခြောငျးလေးတှကေ တိုတိုတုတျတုတျနဲ့ဆိုရငျ သငျ့လကျက ပထဝီဓာတျ စိုးမိုးတဲ့ မွလေကျ ဖွဈပါတယျ။ တညျတညျငွိမျငွိမျနဲ့ ဘဝကို ရငျဆိုငျနတေဲ့သူပါ။ လကျတှေ့ ကတြယျ။ အောကျသကျကပြွေီး ဘယျလောကျ အောငျမွငျ၊ အောငျမွငျ ဘဝငျ မမွငျ့တတျကွပါဘူး။ ခံစားခကျြ ပွငျးထနျသူတှေ ဖွဈပမေယျ့ တုနျလှုပျတဲ့ ပုံစံလုံးဝ မပွဘူး။ သံယောဇဉျ ကွီးတယျ။ တှယျတာ တတျတယျ။ ဖငျတျောတျောနဲ့ မကွှခငျြကွဘူး။ ပွောငျးလဲမှုတှကေို သိပျမကွိုကျဘူး။ နရော၊ ဒသေ၊ အသဈ၊ အစီအစဉျ အသဈတှေ ပွောငျးသှားတာတှကေို မုနျးတတျကွတယျ။ စာဖတျလလေ့ာရတာကို နှဈသကျပွီး အေးအေးဆေးဆေး နတေတျသူ တဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ စနဈတကြ စဉျးစားလလေ့ာသူ ဖွဈတဲ့အတှကျ ကိုယျ့ရဲ့ဘဝအတှကျ ဘာကို ဆကျပွီး ဆောငျရှကျရမယျဆိုတာကို သိနပွေီး ရညျမှနျးခကျြအတှကျ ဦးတညျပွီး လြှောကျလှမျးနသေူပါ။
(၂) ထောငျ့မှနျစတုဂံပုံ လကျဖဝါးရှိပွီး လကျခြောငျးလေးတှကေ ရှညျရှညျသှယျသှယျနဲ့ဆိုရငျ သငျ့လကျက အာပေါဓာတျ စိုးမိုးတဲ့ ရလေကျ ဖွဈပါတယျ။ သဘောကောငျးပွီး ခံစားခကျြတှနေဲ့ အသကျရှငျနတေဲ့ အနုပညာရှငျတှေ ဖွဈပါတယျ။ သူငယျခငျြးက ဒုက်ခရောကျနခြေိနျမှာ ကူညီရနျ အသငျ့ ရှိတတျပွီး ခံစားသိနိုငျစှမျးအလှနျ မွငျ့မားတယျ။ တဈယောကျတညျး ခံစားမှုအမြိုးမြိုး ခံစားနရေတတျတယျ။ အရမျးအစှဲအလမျးကွီးတယျ။ မွငျမွငျသမြှ လူတှကေို ခြီးကြူးတတျတယျ။ စိတျလှငျ့နတေတျတာမြားတယျ။ တဈခါတဈလေ အယူသီးတတျတာမို့ သိပျအပေါငျးအသငျးမရှိဘူး။
(၃) စတုရနျးပုံ လကျဖဝါးရှိပွီး လကျခြောငျးလေးတှကေ ရှညျရှညျသှယျသှယျနဲ့ဆိုရငျ သငျ့လကျက ဝါယောဓာတျ စိုးမိုးတဲ့ လလေကျ ဖွဈပါတယျ။ အကွံဉာဏျတှေ ပတျခြာလညျဝိုငျးနတေဲ့ ဉာဏျကွီးရှငျလေးပါ။ ယဉျကြေးသိမျမှပွေီ့း ဉာဏျရညျ ထကျမွကျတယျ။ လူအမြားရဲ့ ခဈြခငျလေးစားခွငျးကို ရရှိသူတဈယောကျပါ။ နှဈဦး နှဈဖကျ အဆငျပွအေောငျ ညှိပေး၊ ပွောပေးတတျတယျ။ အတှေးခေါငျပွီး ဟိုဆိုဒီရောကျတတျတယျ။ အခြိနျတိုငျး အိုငျဒီယာအသဈတှနေဲ့ ပြျောနတေတျတယျ။
(၄) ထောငျ့မှနျစတုဂံပုံ လကျဖဝါးရှိပွီး လကျခြောငျးလေးတှကေ တိုတိုတုတျတုတျနဲ့ဆိုရငျ တဇေောဓာတျ စိုးမိုးတဲ့ မီးလကျ ပိုငျရှငျ ဖွဈပါတယျ။ လကျအဆဈက ကွီးရငျ ကွီးသလောကျ ခေါငျးမာတယျ။ စိတျဓာတျပွငျးထနျသူ တဈျယောကျ ဖွဈတယျ။ မာန ကွီးတယျ။ ကိုယျ့အလုပျကိုယျ အလှနျ မွတျနိုးသူဖွဈပွီး အသဈအဆနျးတှကေို ဖနျတီးနိုငျတယျ။ စိတျမွနျလကျမွနျရှိတာမို့ စောငျ့ဆိုငျးရမယျဆိုရငျ တဈမိနဈတောငျ စိတျမရှညျဘဲ ဒေါပှတတျသူပါ။ သနား ကွငျနာမှု မရှိဘူး။ ဘဝတဈလြှောကျ နှေးထှေးမှုနဲ့ ဘဝရဲ့ အရသာကို သခြောမသိကွဘူး။ အားသာခကျြက ဆုံးဖွတျခကျြခတြဲ့အခါမှာ တှဝေမှေု တဈစိကလေးမြှ မရှိပါ။ အနုပညာမွောကျသော ပငျကိုယျအတှေးတှေ ရှိပွီး အကွံအစညျတှကေို အကောငျအထညျပျေါအောငျ တီထှငျနိုငျတဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော်..
မှဲ့ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မှဲ့တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုစီရှိပါတယ်လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေက ဆိုကြပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ မှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီး အခုဖော်ပြမယ့် နေရာတွေမှာရှိတဲ့မှဲ့တွေကတော့ ကံကောင်းခြင်းနဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝခြင်းကို ပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့မှဲ့တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ရွယ်တူတန်းတူတွေထက် ငွေကြေး၊ အောင်မြင်မှု ပိုမိုရရှိတတ်တဲ့မှဲ့လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမှဲ့ပိုင်ရှင်တွေက ခေါင်းနည်းနည်းမာတဲ့ သဘာဝရှိပေမဲ့
ဘာပဲလုပ်လုပ်အရမ်းကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်အောင်မြင်တတ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်မှုနဲ့ ငွေကြေးနှစ်ခုစလုံးက အသက် ၃၀ နောက်ပိုင်း ဒါမှမဟုတ် အိမ်ထောင်ကျပြီးမှ ရရှိတတ်ပါတယ်။
မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားမှာဖြစ်ဖြစ်၊ မျက်လုံးနှစ်လုံးကြားမှာဖြစ်ဖြစ် မှဲ့တစ်လုံး ရှိမယ်ဆိုရင် ချမ်းသာပြီး ဘဝတစ်ခုကို သာသာယာယာနဲ့ အခြေချနိုင်မယ့် သူတစ်ဦးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဘဝမှာ တောင့်တစရာမလိုဘဲ ငွေကြေးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ နေရတတ်ပါတယ်။
ခါးရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့ မှဲ့က ကံကောင်းခြင်းရော ကံဆိုးခြင်းရော နှစ်မျိုးစလုံးဖြစ်စေနိုင်
ပါတယ်။ ဥစ္စာပစ္စည်းပြည့်စုံကြွယ်ဝပြီး ကြီးပွားတိုးတက်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဘဝရဲ့အချိန်တော်တော်များများမှာ ဝမ်းနည်းစရာ၊ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကြုံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ညာဘက်လက်ဝါးပြင်မှာ မှဲ့ရှိရင် ဘဝမှာ အောင်မြင်မှုနဲ့ ကြွယ်ဝမှုနှစ်မျိုးလုံး ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကံကောင်းမယ့်အချိန်က လက်ဝါးပြင်ပေါ်က မှဲ့ရဲ့ တည်နေရာအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ မှဲ့က လက်ဝါးရဲ့ အပေါ်ပိုင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကစပြီး အောင်မြင်ပြည့်စုံမှာဖြစ်ပြီးလက်ဝါးရဲ့ အောက်ပိုင်းမှာရှိမယ်ဆိုရင် အသက်ရလာတဲ့အချိ်န်မှာမှ စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မှာပါ။
ရင်ဘတ်ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းမှာရှိတဲ့မှဲ့က စည်းစိမ်ဥစ္စာ အများအပြားပိုင်ဆိုင်စေပြီး ဘဝကို အေးအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနိုင်ခြင်းကို ပြတဲ့မှဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
မေးစေ့ပေါ်မှာရှိတဲ့မှဲ့က စည်းစိမ်ဥစ္စာနဲ့ ပတ်သက်ရင် ကံကောင်းခြင်းကို ပြပေမဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် အားနည်းပြီး အထီးကျန်နေရတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်.
ဒီနရော (၇)ခု မှာ တဈနရောလောကျ မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လကျလှတျမခံနဲ့နျော..
မှဲ့ နဲ့ပတျသကျပွီး အယူအဆ အမြိုးမြိုးရှိကွပါတယျ။ မှဲ့တဈခု
မှဲ့ နဲ့ပတျသကျပွီး အယူအဆ အမြိုးမြိုးရှိကွပါတယျ။ မှဲ့တဈခုစီတိုငျးမှာ ဘဝနဲ့ ပတျသကျပွီး ဖုံးကှယျထားတဲ့ မကျဆခြေျ့တဈခုစီရှိပါတယျလို့ မှဲ့ပညာရှငျတှကေ ဆိုကွပါတယျ။
ခန်ဓာကိုယျရဲ့ နရောအမြိုးမြိုးမှာ မှဲ့တှရှေိနိုငျပွီး အခုဖျောပွမယျ့ နရောတှမှောရှိတဲ့မှဲ့တှကေတော့ ကံကောငျးခွငျးနဲ့ စညျးစိမျဥစ်စာကွှယျဝခွငျးကို ပေးနိုငျပါတယျတဲ့။
အရမျးကို ကောငျးတဲ့မှဲ့တဈမြိုးဖွဈပွီး ရှယျတူတနျးတူတှထေကျ ငှကွေေး၊ အောငျမွငျမှု ပိုမိုရရှိတတျတဲ့မှဲ့လို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုမှဲ့ပိုငျရှငျတှကေ ခေါငျးနညျးနညျးမာတဲ့ သဘာဝရှိပမေဲ့
ဘာပဲလုပျလုပျအရမျးကို မွနျမွနျဆနျဆနျအောငျမွငျတတျတဲ့သူတှေ ဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ အောငျမွငျမှုနဲ့ ငှကွေေးနှဈခုစလုံးက အသကျ ၃၀ နောကျပိုငျး ဒါမှမဟုတျ အိမျထောငျကပြွီးမှ ရရှိတတျပါတယျ။
မကျြခုံးနှဈခုကွားမှာဖွဈဖွဈ၊ မကျြလုံးနှဈလုံးကွားမှာဖွဈဖွဈ မှဲ့တဈလုံး ရှိမယျဆိုရငျ ခမျြးသာပွီး ဘဝတဈခုကို သာသာယာယာနဲ့ အခွခေနြိုငျမယျ့ သူတဈဦးဖွဈပါလိမျ့မယျ။ ဘဝမှာ တောငျ့တစရာမလိုဘဲ ငှကွေေးပွညျ့ပွညျ့စုံစုံနဲ့ နရေတတျပါတယျ။
ခါးရဲ့ဘေးတဈဖကျတဈခကျြမှာရှိတဲ့ မှဲ့က ကံကောငျးခွငျးရော ကံဆိုးခွငျးရော နှဈမြိုးစလုံးဖွဈစနေိုငျ
ပါတယျ။ ဥစ်စာပစ်စညျးပွညျ့စုံကွှယျဝပွီး ကွီးပှားတိုးတကျမှာ ဖွဈပမေဲ့ ဘဝရဲ့အခြိနျတျောတျောမြားမြားမှာ ဝမျးနညျးစရာ၊ စိတျမခမျြးမွစေ့ရာတှကွေုံရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ညာဘကျလကျဝါးပွငျမှာ မှဲ့ရှိရငျ ဘဝမှာ အောငျမွငျမှုနဲ့ ကွှယျဝမှုနှဈမြိုးလုံး ရနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကံကောငျးမယျ့အခြိနျက လကျဝါးပွငျပျေါက မှဲ့ရဲ့ တညျနရောအပျေါမှာမူတညျပါတယျ။ မှဲ့က လကျဝါးရဲ့ အပျေါပိုငျးမှာရှိမယျဆိုရငျငယျရှယျတဲ့အခြိနျကစပွီး အောငျမွငျပွညျ့စုံမှာဖွဈပွီးလကျဝါးရဲ့ အောကျပိုငျးမှာရှိမယျဆိုရငျ အသကျရလာတဲ့အချြိနျမှာမှ စညျးစိမျဥစ်စာနဲ့ အောငျမွငျမှုတှရေရှိနိုငျမှာပါ။
ရငျဘတျရဲ့ ညာဘကျအခွမျးမှာရှိတဲ့မှဲ့က စညျးစိမျဥစ်စာ အမြားအပွားပိုငျဆိုငျစပွေီး ဘဝကို အေးအေးခမျြးခမျြးပြျောပြျောရှငျရှငျ ဖွတျသနျးနိုငျခွငျးကို ပွတဲ့မှဲ့ဖွဈပါတယျ။
မေးစပေ့ျေါမှာရှိတဲ့မှဲ့က စညျးစိမျဥစ်စာနဲ့ ပတျသကျရငျ ကံကောငျးခွငျးကို ပွပမေဲ့ လူမှုဆကျဆံရေးနဲ့ ပတျသကျရငျ အားနညျးပွီး အထီးကနျြနရေတတျတဲ့သူတှဖွေဈပါတယျ.
ပုံတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျဉ်းလည်း ကျဉ်း၊ နိမ့်လည်းနိမ့်သော နဖူးပိုင်ရှင်များသည်ကား အလိုက်မသိတတ်သောသူများ ဖြစ်သည်။ တာဝန်မဲ့ တတ်၊ လုပ်တတ်သည်။ လုပ်ငန်းကြီး၊ တာဝန်ကြီး များကို ကိုင်တွယ်ရန် ခက်ခဲသည်။ ကိုယ်လုပ်သော အလုပ်ကို တာဝန်မယူတတ်။ လေးလေးနက်နက်မ လုပ်တတ်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန် လုပ်တတ်သည်။ မည် သည့်လုပ်ငန်းကို လုပ်သည်ဖြစ်စေ အာရုံစူးစိုက်ခြင်း မရှိ။ ရိုးသားမှုမရှိ။ လိမ်ညာတတ်သည်။ လှည့်စား တတ်သည်။ မှန်မှန်ကန်ကန် ပြောတတ်ခြင်းမရှိ။ အချို့သောအရာများကို လူမဆန်ဘဲလုပ်တတ်သည်။ ကြမ်းကြုတ်သည့် စရိုက်ဆိုးများရှိသည်။ မကောင်း သောကိစ္စ၊ ဥပဒေနှင့် မကိုက်ညီသော အလုပ်ကိစ္စ များတွင် ထက်မြက်သည်။ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်များ သည်။ သူတစ်ပါးအပေါ် ချောက်တွန်းတတ်သည်။ နိုင်ငံရေးလုပ်စားသူများတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
ဆံပင်တစ်ဖက်ခြမ်းသည် နားထင်စပ်သို့ဝင်၍ ခပ်မြင့်မြင့်ဖြစ်ကာ အခြားတစ်ဖက်သည် ဆံပင်များ ပေါက်၍ ခေါင်းကြီးပြီး တစ်ခြမ်းဖုံး၊ တစ်ဖက်နိမ့် တစ်ဖက်မြင့်နဖူးတွင် ဆံစအုပ်သော နဖူးပိုင်ရှင် များကို အနိမ့်အမြင့် မညီညွတ်သောနဖူး Unbalance Foreheads ပိုင်ရှင်များဟုခေါ်သည်။ အတတ်ပညာ လေ့လာမှုပိုင်းတွင် အဆင်မပြေဖြစ် တတ်သည်။ တတ်သိသောပညာနှင့် ဆောင်ရွက်မှု များ လိုက်လျောညီထွေမရှိသော သဘာဝရှိသည်။ အလိုအလျောက် အားမလိုအားမရဖြစ်နေမည်။ အခြေအနေအရပ်ရပ်အပေါ် အားမလိုအားမရ ဖြစ် နေမည်။ လူငယ်များတွင် အထက်ပါနဖူးအနိမ့်အမြင့် ညီညွတ်မှုမရှိက “Delinquency” “ဒယ်လီ ကွမ်စီ”ဟုခေါ်သော လူငယ်များကျူးလွန်သော ပြစ်မှု ငယ်များ ပြုတတ်သည်။ အမျိုးသမီးများတွင် ဤသို့ နဖူးဖုံးထားသော ဆံပင်ပုံရှိက အတ္တကြီးမားသည်။ အခွင့်အခါ ကောင်းကိုအသုံးချ၍ “Unscrupulous” မသမာသောစိတ် မွေးတတ်သည်။ ဘ၀ လမ်းကြောင်းတွင် အတက်အကျများပြားသည်။ တည်ငြိမ်မှုနည်းပါးသည်။ ဆိုးသောနဖူးဟု သတ်မှတ် သည်။
နဖူးပြင်ပေါ်တွင် သိသာမြင်သာ ပေါ်လွင် ထင်ရှားသော အနာရွတ်(သို့မဟုတ်)အမည်းကွက်၊ အညိုကွက်များ အထင်အရှားပါရှိက ဘ၀လမ်း ကြောင်းတွင် မသေချာ မရေရာမှုများ လွှမ်းမိုးခြင်း၊ ကုသိုလ်ကံဆိုးခြင်း၊ အခက်အခဲကြုံခြင်း၊ အတိုက် အခံ အတားအဆီးများတွင် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရခြင်း ရှိမည်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရလာခြင်းထက် သဘာဝအ တိုင်း အညိုကွက်၊ အဖြူစက်၊ အမည်းစက် ပေါ်ထွန်း က အလွန်ဆိုးသည်။ နဖူးပိုင်ရှင်၏ ကံကိုအညံ့အဆိုး ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နဖူးအလယ်နှင့် နီးစပ်လေ အဆိုး အင်အား ပိုလာလေဖြစ်သည်။ ကံညှိုးမှိန်စေသည်။ ဖြစ်လိုသော ဆန္ဒများလေ အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ် လေသည်။ နဖူးပေါ်တွင် အမာရွတ်များလေ ဘ၀ ကြမ်းလေ ဖြစ်မည်။ အခက်အခဲများကို ကျော်လွန် ပြီးမှ ဘ၀တိုးတက်မည်။
နဖူးပြင်ပေါ်ရှိ အရေးပြားသည် တင်းတင်း ရင်းရင်းနဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ကင်းစင်ကာ ကြည်လင် ၏။ မှဲ့၊ အမှတ်အသားဆိုး၊ အညိုကွက်၊ အမည်းကွက် ကင်းစင်၍ ကြည်လင်က ဤနဖူးမျိုးကို ကြည်စင် သော နဖူးဟုသတ်မှတ်သည်။ အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားနိုင်စွမ်းရှိသည်။ မြင့်မားသော ဘ၀အခြေ အနေကို ကံကြမ္မာ စေစားမှုနှင့် ရောက်ရှိမည်။ အခက်အခဲနှင့်တွေ့တိုင်း ကူညီသူ ပေါ်လာတတ် သည်။ စိတ်ပူပင်တတ်သည်။ ဘ၀လမ်းကြောင်းတွင် အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးချယ်မှုတွင် အနှောင့်အယှက်များတတ်သည်။ ချစ်ဦးသူနှင့် ကွေ ကွင်းပြီးမှ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်ဘက်ကို ရရှိမည့် သဘာဝရှိသည်။
နဖူးပြင်တွင် ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အရစ်တစ်ရစ်ရှိက ဘ၀လမ်းကြောင်းတွင် အခက် အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်ပြီးမှ ဘ၀ပြည့်စုံမည်။ ငယ်ရွယ် နုငယ် စဉ်ကာလတွင် အတိုက်အခံများနှင့်ကြုံမည်။ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုကို ပိုင်ဆိုင်တတ်သည်။ အခွင့်အရေးကိုရ လျှင်ရသလို အသုံးချတတ်သည်။ အခွင့်အလမ်းများ ကိုလည်း အမြဲရှာဖွေနေသူဖြစ်သည်။ တော်တန်ရုံ အခြေအနေနှင့် တင်းတိမ်ရောင့်ရဲတတ်သူ မဟုတ်၊ ရည်မှန်းချက် မြင့်မြင့်မားမားနှင့် အလိုကြီးစွာ လုပ် ကိုင်တတ်သည်။ ဇွဲကြီးသည်။ အလုပ်နှင့်လက်နှင့် မပြတ်အောင် လုပ်တတ်သည်.
ပုံတှငျ ဖျောပွထားသညျ့အတိုငျး ကဉျြးလညျး ကဉျြး၊ နိမျ့လညျးနိမျ့သော နဖူးပိုငျရှငျမြားသညျကား အလိုကျမသိတတျသောသူမြား ဖွဈသညျ။ တာဝနျမဲ့ တတျ၊ လုပျတတျသညျ။ လုပျငနျးကွီး၊ တာဝနျကွီး မြားကို ကိုငျတှယျရနျ ခကျခဲသညျ။ ကိုယျလုပျသော အလုပျကို တာဝနျမယူတတျ။ လေးလေးနကျနကျမ လုပျတတျ။ ပေါ့ပေါ့တနျတနျ လုပျတတျသညျ။ မညျ သညျ့လုပျငနျးကို လုပျသညျဖွဈစေ အာရုံစူးစိုကျခွငျး မရှိ။ ရိုးသားမှုမရှိ။ လိမျညာတတျသညျ။ လှညျ့စား တတျသညျ။ မှနျမှနျကနျကနျ ပွောတတျခွငျးမရှိ။ အခြို့သောအရာမြားကို လူမဆနျဘဲလုပျတတျသညျ။ ကွမျးကွုတျသညျ့ စရိုကျဆိုးမြားရှိသညျ။ မကောငျး သောကိစ်စ၊ ဥပဒနှေငျ့ မကိုကျညီသော အလုပျကိစ်စ မြားတှငျ ထကျမွကျသညျ။ ဉာဏျနီဉာဏျနကျမြား သညျ။ သူတဈပါးအပျေါ ခြောကျတှနျးတတျသညျ။ နိုငျငံရေးလုပျစားသူမြားတှငျ တှရှေိ့နိုငျသညျ။
ဆံပငျတဈဖကျခွမျးသညျ နားထငျစပျသို့ဝငျ၍ ခပျမွငျ့မွငျ့ဖွဈကာ အခွားတဈဖကျသညျ ဆံပငျမြား ပေါကျ၍ ခေါငျးကွီးပွီး တဈခွမျးဖုံး၊ တဈဖကျနိမျ့ တဈဖကျမွငျ့နဖူးတှငျ ဆံစအုပျသော နဖူးပိုငျရှငျ မြားကို အနိမျ့အမွငျ့ မညီညှတျသောနဖူး Unbalance Foreheads ပိုငျရှငျမြားဟုချေါသညျ။ အတတျပညာ လလေ့ာမှုပိုငျးတှငျ အဆငျမပွဖွေဈ တတျသညျ။ တတျသိသောပညာနှငျ့ ဆောငျရှကျမှု မြား လိုကျလြောညီထှမေရှိသော သဘာဝရှိသညျ။ အလိုအလြောကျ အားမလိုအားမရဖွဈနမေညျ။ အခွအေနအေရပျရပျအပျေါ အားမလိုအားမရ ဖွဈ နမေညျ။ လူငယျမြားတှငျ အထကျပါနဖူးအနိမျ့အမွငျ့ ညီညှတျမှုမရှိက “Delinquency” “ဒယျလီ ကှမျစီ”ဟုချေါသော လူငယျမြားကြူးလှနျသော ပွဈမှု ငယျမြား ပွုတတျသညျ။ အမြိုးသမီးမြားတှငျ ဤသို့ နဖူးဖုံးထားသော ဆံပငျပုံရှိက အတ်တကွီးမားသညျ။ အခှငျ့အခါ ကောငျးကိုအသုံးခြ၍ “Unscrupulous” မသမာသောစိတျ မှေးတတျသညျ။ ဘ၀ လမျးကွောငျးတှငျ အတကျအကမြားပွားသညျ။ တညျငွိမျမှုနညျးပါးသညျ။ ဆိုးသောနဖူးဟု သတျမှတျ သညျ။
နဖူးပွငျပျေါတှငျ သိသာမွငျသာ ပျေါလှငျ ထငျရှားသော အနာရှတျ(သို့မဟုတျ)အမညျးကှကျ၊ အညိုကှကျမြား အထငျအရှားပါရှိက ဘဝလမျး ကွောငျးတှငျ မသခြော မရရောမှုမြား လှမျးမိုးခွငျး၊ ကုသိုလျကံဆိုးခွငျး၊ အခကျအခဲကွုံခွငျး၊ အတိုကျ အခံ အတားအဆီးမြားတှငျ ထိပျတိုကျရငျဆိုငျရခွငျး ရှိမညျ။ ထိခိုကျဒဏျရာ ရလာခွငျးထကျ သဘာဝအ တိုငျး အညိုကှကျ၊ အဖွူစကျ၊ အမညျးစကျ ပျေါထှနျး က အလှနျဆိုးသညျ။ နဖူးပိုငျရှငျ၏ ကံကိုအညံ့အဆိုး ဖွဈပျေါစသေညျ။ နဖူးအလယျနှငျ့ နီးစပျလေ အဆိုး အငျအား ပိုလာလဖွေဈသညျ။ ကံညှိုးမှိနျစသေညျ။ ဖွဈလိုသော ဆန်ဒမြားလေ အလှဲလှဲအခြျောခြျောဖွဈ လသေညျ။ နဖူးပျေါတှငျ အမာရှတျမြားလေ ဘ၀ ကွမျးလေ ဖွဈမညျ။ အခကျအခဲမြားကို ကြျောလှနျ ပွီးမှ ဘဝတိုးတကျမညျ။
နဖူးပွငျပျေါရှိ အရေးပွားသညျ တငျးတငျး ရငျးရငျးနဲ့ ဒဏျရာဒဏျခကျြကငျးစငျကာ ကွညျလငျ ၏။ မှဲ့၊ အမှတျအသားဆိုး၊ အညိုကှကျ၊ အမညျးကှကျ ကငျးစငျ၍ ကွညျလငျက ဤနဖူးမြိုးကို ကွညျစငျ သော နဖူးဟုသတျမှတျသညျ။ အခကျအခဲမြားကို ကြျောလှားနိုငျစှမျးရှိသညျ။ မွငျ့မားသော ဘဝအခွေ အနကေို ကံကွမ်မာ စစေားမှုနှငျ့ ရောကျရှိမညျ။ အခကျအခဲနှငျ့တှတေို့ငျး ကူညီသူ ပျေါလာတတျ သညျ။ စိတျပူပငျတတျသညျ။ ဘဝလမျးကွောငျးတှငျ အိမျထောငျရေးနှငျ့ ပတျသကျ၍ ရှေးခယျြမှုတှငျ အနှောငျ့အယှကျမြားတတျသညျ။ ခဈြဦးသူနှငျ့ ကှေ ကှငျးပွီးမှ အဆငျပွသေော အိမျထောငျဘကျကို ရရှိမညျ့ သဘာဝရှိသညျ။
နဖူးပွငျတှငျ ပုံတှငျဖျောပွထားသညျ့အတိုငျး အရဈတဈရဈရှိက ဘဝလမျးကွောငျးတှငျ အခကျ အခဲနှငျ့ရငျဆိုငျပွီးမှ ဘဝပွညျ့စုံမညျ။ ငယျရှယျ နုငယျ စဉျကာလတှငျ အတိုကျအခံမြားနှငျ့ကွုံမညျ။ ခမျြးသာ ကွှယျဝမှုကို ပိုငျဆိုငျတတျသညျ။ အခှငျ့အရေးကိုရ လြှငျရသလို အသုံးခတြတျသညျ။ အခှငျ့အလမျးမြား ကိုလညျး အမွဲရှာဖှနေသေူဖွဈသညျ။ တျောတနျရုံ အခွအေနနှေငျ့ တငျးတိမျရောငျ့ရဲတတျသူ မဟုတျ၊ ရညျမှနျးခကျြ မွငျ့မွငျ့မားမားနှငျ့ အလိုကွီးစှာ လုပျ ကိုငျတတျသညျ။ ဇှဲကွီးသညျ။ အလုပျနှငျ့လကျနှငျ့ မပွတျအောငျ လုပျတတျသညျ.
(2017) မှာအချစ်နဲ့ဘယ်လိုဆုံတွေ့မလဲ ဆိုတာ ( ရာသီခွင်အလိုက် )
အချစ်နဲ့မဆုံတွေ့ရသေးတဲ့ Single သမားတွေအနေနဲ့ အချစ်နဲ့ (၂၀၁၇) ခုနှစ်မှာ ဘယ်လိုဆုံတွေ့မလဲဆိုတာကို ရာသီခွင်အလိုက် ဖော်ပြပေးချင်ပါ တယ်။
(၁)Aries (မိဿရာသီဖွား – မတ်လ ၂၁ မှ ဧပြီ ၁၉)
ဒီရာသီဖွားတွေအတွက်ကတော့ ယုံကြည်မှုရှိပြီး ရဲရင့်သူ၊တမူထူးခြား သူတစ်ေ ယာက်ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။သင့်အနေနဲ့နဲ့လည်း လက်ခံယုံကြည်ေ ပးနိုင်မယ့် သူမျိုးပါ။ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလူအပေါ်မှာ သင်က ဘယ်တုန်းကမှ အလျှော့ပေး၊အ ရှုံးပေးတာမျိုး မလုပ်ခဲ့ဘူးသူပါ။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင် သင့်ကို အလျှော့ပေးတတ် သူမျိုးပါ။သင်နဲ့ခဏတာ ဆုံခဲ့ဖူးသူထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ခဏတာကနေ သင့်ဆီကို တစ်ဘ၀စာအချစ်အဖြစ် ရောက်လာမှာပါ။
(၂) Taurus (ပြိဿရာသီဖွား–ဧပြီ ၂ဝ မှ မေ ၂ဝ )
ဒီရာသီဖွားတွေကတော့ အချစ်နဲ့ဆုံပြီးသားတွေပါ။ဒီနှစ်မှာတော့ သင့်ရဲ့ အချ စ်ဟောင်း Ex ဆီကို သင်ပြန်သွားမှာပါ။သူ့ဘက်ကလည်း အားလုံးကို နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
(၃) Gemini (မေထုန်ရာသီဖွား– မေ ၂၁ မှ ဇွန် ၂ဝ)
သင်ကတော့ အလုပ်မှာသာ အချိန်တွေ၊ခံစားချက်တွေ စုပုံထားသူပါ။ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ အချစ်ကိုလည်း အလုပ်မှာပဲ တွေ့မှာပါ။အစပိုင်းမှာတော့ နည်းနည်း ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။သင်ကငြင်းပယ်ကောင်း ငြင်းပယ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမယ့် သူကတော့ သင့်ကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့လက်လွှတ်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။သင့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်က သင့်အချစ်အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာမှာပါ။
(၄) Cancer (ကရကဋ်ရာသီဖွား– ဇွန် ၂၁ မှ ဇူလိုင် ၂၂ )
သင့်လိုပဲ မိသားစုကို တန်ဖိုးထားမယ့်သူမျိုးနဲ့ဆုံတွေ့မှာပါ။သင့်မိသားစုနဲ့ လည်း ကောင်းကောင်းသိတဲ့သူဖြစ်ပြီး သူတို့နဲ့တရင်းတနှီးရှိသူပါ။မြန်မြန် ဆန်ဆန်ပဲချစ်မိသွားမယ့် အချစ်ဇာတ်လမ်းမျိုးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
(၅) Leo (သိဟ်ရာသီဖွား– ဇူလိုင် ၂၃ မှ သြဂုတ်၂၂)
သင့်ရဲ့အချစ်ကတော့ သင့်ကိုစိန်ခေါ်မယ့် သူတစ်ယောက်အဖြစ် သင့်ရှေ့မှာ ထွက်ပေါ်လာမှာပါ။အစပိုင်းမှာတော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ကြ၊ မုန်းကြရင်း နောက်ပိုင်းကျမှာသာ အချစ်တွေပေါက်ဖွားလာပြီး relationship တစ်ခုပေါ်ထွက်လာမှာပါ။ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းကြီးချစ်သွားမယ့် ဇာတ်လမ်းမျိုးေ တာ့ မဟုတ်ပဲ သင့်ဘက်က ၀န်မခံချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် သူငယ်ချင်းဘ၀နဲ့ခဏေ တာ့ ကြာနေအုံးမှာပါ။
(၆) virgo (ကန်ရာသီဖွား– သြဂုတ် ၂၃ မှ စက်တင်ဘာ ၂၂ )
အတိတ်က ဇာတ်လမ်းတွေကို နားလည်လက်ခံပေးမယ့် သူမျိုးနဲ့ဆုံဆည်းရမှာပါ။ အတိတ်ကဒဏ်ရာဟောင်းတွေကြောင့် နာကျင်နေရတဲ့ ပူပန်သော က တွေ ကို ဖျောက်ပေးမယ့်သူမျိုးပါ။ဒီနှစ်ရဲ့နွေရာသီကာလလောက်မှာ ဆုံတွေ့ရဖို့ ရှိပါ တယ်။သင့်အတွက် ယုံကြည်မှုကို ပြန်တည်ဆောက်ပေးပြီး ထပ်ချစ်တတ်အော င် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မယ့် သူမျိုးပါ။
(၇) Libra (တူရာသီဖွား– စက်တင်ဘာ ၂၃ မှ အောက်တိုဘာ ၂၂ )
ဒီရာသီဖွားတွေကတော့ ပါတီ(သို့)ပွဲတစ်ခုခုမှာ တွေ့မှာပါ။သင်နဲ့မလှမ်းမကမ်း မှာရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်နဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံပြီး အကြည့်တွေခွာမရအောင် ဖြစ်နေရ င်တော့ သင့်ရဲ့အချစ်က အဲ့ဒီလူပါ။
(၈) Scorpio (ဗြိစ္ဆာရာသီဖွား– အောက်တိုဘာ ၂၃ မှ နိုဝင်ဘာ ၂၁)
dating apps တွေနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေက အချစ်ဂိမ်းတွေကို သင့်အနေနဲ့ည ည်းငွေ့လောက်ပြီထင်ပါတယ်။သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုက လူတွေနဲ့ ဆက်နွယ်ဖို့ကို လက်ခံလိုက်ဖို့ ခက်နေတာပါ။သင့်အတွက်ကတော့ အချစ်က တကယ်ကိုရှုပ်ထွေး ခက်ခဲတ့အရာပါ။ချစ်ဖို့ခက်နေပေမယ့် တကယ်ချစ်မိသွား ရင်တော့ အချစ်ကြီးချစ်မိသွားပါလိမ့်မယ်။သင်ဆုံရမယ့်လူကေ တာ့ ဝေးဝေး ကိုပြေးရှာစရာမလိုပါဘူး။ သင့်နဲ့သိကျွမ်းပြီးသားသူပါ။သင့်ကိုယ်သင်နား မလ ည်နိုင်နေတဲ့ အချိန်မှာတောင် သင့်ကို နားလည်နိုင်သူတစ်ယောက်နဲ့ဆုံရမှာပါ။
(၉) Sagittarius (ဓနုရာသီဖွား– နိုဝင်ဘာ ၂၂ မှ ဒီဇင်ဘာ ၂၁)
ခရီးသွားရင်းဆုံရမှာပါ။တစ်ခါမှမရောက်ဖူးတဲ့နေရာကို သွားရင်း တစိမ်းတစ်ေ ယာက်ကို ခပ်မြန်မြန် ချစ်မိသွားမှာပါ။သင်တို့နှစ်ယောက်အ ကြား ခြားနားမှုေ တွရှိနေတာကို သိနေပေမယ့်လည်း ရအောင်ကြိုးစားကျော်လွှားပြီး ချစ်မိ သွားပါလိမ့်မယ်။
(၁ဝ) Capricorn (မကာရရာသီဖွား– ဒီဇင်ဘာ ၂၂ မှ ဇန်နဝါရီ ၁၉ )
အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ဒိတ်လုပ်တာတွေကို ရပ်ချင်နေပြီး မကြာခင်မှာပဲ အဲ့ဒီလို လုပ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေပါတယ်။
(၁၁) Aquarius (ကုံရာသီဖွား– ဇန်နဝါရီ ၂ဝ မှ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈)
လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးတဲ့သင့်အနေနဲ့ Single ဘ၀ကို လုံးဝစွန့်လွှတ်ချင်တဲ့ အထိဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးမယ့် သူနဲ့ ဆုံဆည်းရမှာပါ။အလုပ်(ဒါမှမဟုတ်) သင်ဝါသနာပါရာတစ်ခုခုကို အကြောင်းပြုပြီး သူနဲ့ဆုံဆည်းရမှာပါ။ရည်ရွယ် ချက်ြ ခင်းတူ၊Career Life ချင်းလည်းတူမယ့် သူမျိုးပါ။စိတ်တူ၊ကိုယ်တူ သင်တို့ နှစ်ေ ယာက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အတူအားပေးရင်း ပျော် ရာကောင်းတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်လာမှာပါ။
(၁၂) Pisces (မိန်ရာသီဖွား– ဖေဖေါ်ဝါရီ ၁၉ မှ မတ်လ ၂ဝ )
စိတ်ခံစားချက်ပြင်းသူ၊ခံစားချက်တွေကို မထိခိုက်စေတဲ့ သူမျိုးနဲ့ဆုံမှာပါ။သင်တို့ရဲ့ ချစ်ဇာတ်လမ်းကတော့ စာအုပ်တစ်အုပ်၊၀တ္ထုတစ်ပုဒ်လို ဖြစ်လာမှာပါ။သင် မြ ကာ ခ ဏ မြင်တွေ့နေကျသူမျိုးဖြစ်ပေမယ့် မျက်လုံးလျှံပြီး ကျော်ကျော်သွားတတ် တဲ့သူမျိုးပါ။တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မသိပဲ ဘာလို့များနေမိခဲ့ကြတာ လိမ့်လို့ တွေးမိလောက်မယ့်သူမျိုးပါ။
(၂၀၁၇)မှာ အခဈြနဲ့ ဘယျလို ဆုံတှမေ့လဲ(ရာသီခှငျအလိုကျ)
အခဈြနဲ့မဆုံတှရေ့သေးတဲ့ Single သမားတှအေနနေဲ့ အခဈြနဲ့ (၂၀၁၇) ခုနှဈမှာ ဘယျလိုဆုံတှမေ့လဲဆိုတာကို ရာသီခှငျအလိုကျ ဖျောပွပေးခငျြပါ တယျ။
(၁)Aries (မိဿရာသီဖှား – မတျလ ၂၁ မှ ဧပွီ ၁၉)
ဒီရာသီဖှားတှအေတှကျကတော့ ယုံကွညျမှုရှိပွီး ရဲရငျ့သူ၊တမူထူးခွား သူတဈေ ယာကျကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။သငျ့အနနေဲ့နဲ့လညျး လကျခံယုံကွညျေ ပးနိုငျမယျ့ သူမြိုးပါ။ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီလူအပျေါမှာ သငျက ဘယျတုနျးကမှ အလြှော့ပေး၊အ ရှုံးပေးတာမြိုး မလုပျခဲ့ဘူးသူပါ။တနညျးအားဖွငျ့ဆိုရငျ သငျ့ကို အလြှော့ပေးတတျ သူမြိုးပါ။သငျနဲ့ခဏတာ ဆုံခဲ့ဖူးသူထဲက တဈယောကျဖွဈပွီး၊ခဏတာကနေ သငျ့ဆီကို တဈဘဝစာအခဈြအဖွဈ ရောကျလာမှာပါ။
(၂) Taurus (ပွိဿရာသီဖှား–ဧပွီ ၂ဝ မှ မေ ၂ဝ )
ဒီရာသီဖှားတှကေတော့ အခဈြနဲ့ဆုံပွီးသားတှပေါ။ဒီနှဈမှာတော့ သငျ့ရဲ့ အခြ ဈဟောငျး Ex ဆီကို သငျပွနျသှားမှာပါ။သူ့ဘကျကလညျး အားလုံးကို နားလညျ ခှငျ့လှတျပေးပါလိမျ့မယျ။
(၃) Gemini (မထေုနျရာသီဖှား– မေ ၂၁ မှ ဇှနျ ၂ဝ)
သငျကတော့ အလုပျမှာသာ အခြိနျတှေ၊ခံစားခကျြတှေ စုပုံထားသူပါ။ဒါကွောငျ့ သငျ့ရဲ့ အခဈြကိုလညျး အလုပျမှာပဲ တှမှေ့ာပါ။အစပိုငျးမှာတော့ နညျးနညျး ရှုပျထှေးနိုငျပါတယျ။သငျကငွငျးပယျကောငျး ငွငျးပယျပါလိမျ့မယျ။ဒါပမေယျ့ သူကတော့ သငျ့ကိုလှယျလှယျလေးနဲ့လကျလှတျခံမှာမဟုတျပါဘူး။သငျ့ရဲ့ လုပျဖျောကိုငျဖကျတဈယောကျက သငျ့အခဈြအဖွဈ ထှကျပျေါလာမှာပါ။
(၄) Cancer (ကရကဋျရာသီဖှား– ဇှနျ ၂၁ မှ ဇူလိုငျ ၂၂ )
သငျ့လိုပဲ မိသားစုကို တနျဖိုးထားမယျ့သူမြိုးနဲ့ဆုံတှမှေ့ာပါ။သငျ့မိသားစုနဲ့ လညျး ကောငျးကောငျးသိတဲ့သူဖွဈပွီး သူတို့နဲ့တရငျးတနှီးရှိသူပါ။မွနျမွနျ ဆနျဆနျပဲခဈြမိသှားမယျ့ အခဈြဇာတျလမျးမြိုးဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
(၅) Leo (သိဟျရာသီဖှား– ဇူလိုငျ ၂၃ မှ သွဂုတျ၂၂)
သငျ့ရဲ့အခဈြကတော့ သငျ့ကိုစိနျချေါမယျ့ သူတဈယောကျအဖွဈ သငျ့ရှမှေ့ာ ထှကျပျေါလာမှာပါ။အစပိုငျးမှာတော့ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ရနျဖွဈကွ၊ မုနျးကွရငျး နောကျပိုငျးကမြှာသာ အခဈြတှပေေါကျဖှားလာပွီး relationship တဈခုပျေါထှကျလာမှာပါ။ဒါပမေယျ့ ခကျြခငျြးကွီးခဈြသှားမယျ့ ဇာတျလမျးမြိုးေ တာ့ မဟုတျပဲ သငျ့ဘကျက ၀နျမခံခငျြတဲ့ စိတျကွောငျ့ သူငယျခငျြးဘဝနဲ့ခဏေ တာ့ ကွာနအေုံးမှာပါ။
(၆) virgo (ကနျရာသီဖှား– သွဂုတျ ၂၃ မှ စကျတငျဘာ ၂၂ )
အတိတျက ဇာတျလမျးတှကေို နားလညျလကျခံပေးမယျ့ သူမြိုးနဲ့ဆုံဆညျးရမှာပါ။ အတိတျကဒဏျရာဟောငျးတှကွေောငျ့ နာကငျြနရေတဲ့ ပူပနျသော က တှေ ကို ဖြောကျပေးမယျ့သူမြိုးပါ။ဒီနှဈရဲ့နှရောသီကာလလောကျမှာ ဆုံတှရေ့ဖို့ ရှိပါ တယျ။သငျ့အတှကျ ယုံကွညျမှုကို ပွနျတညျဆောကျပေးပွီး ထပျခဈြတတျအော ငျ စှမျးဆောငျပေးနိုငျမယျ့ သူမြိုးပါ။
(၇) Libra (တူရာသီဖှား– စကျတငျဘာ ၂၃ မှ အောကျတိုဘာ ၂၂ )
ဒီရာသီဖှားတှကေတော့ ပါတီ(သို့)ပှဲတဈခုခုမှာ တှမှေ့ာပါ။သငျနဲ့မလှမျးမကမျး မှာရှိတဲ့ သူတဈယောကျနဲ့ မကျြလုံးခငျြးဆုံပွီး အကွညျ့တှခှောမရအောငျ ဖွဈနရေ ငျတော့ သငျ့ရဲ့အခဈြက အဲ့ဒီလူပါ။
(၈) Scorpio (ဗွိစ်ဆာရာသီဖှား– အောကျတိုဘာ ၂၃ မှ နိုဝငျဘာ ၂၁)
dating apps တှနေဲ့ဆိုရှယျမီဒီယာတှကေ အခဈြဂိမျးတှကေို သငျ့အနနေဲ့ည ညျးငှလေ့ောကျပွီထငျပါတယျ။သငျ့ရဲ့ပငျကိုယျစိတျခံစားခကျြကိုက လူတှနေဲ့ ဆကျနှယျဖို့ကို လကျခံလိုကျဖို့ ခကျနတောပါ။သငျ့အတှကျကတော့ အခဈြက တကယျကိုရှုပျထှေး ခကျခဲတ့အရာပါ။ခဈြဖို့ခကျနပေမေယျ့ တကယျခဈြမိသှား ရငျတော့ အခဈြကွီးခဈြမိသှားပါလိမျ့မယျ။သငျဆုံရမယျ့လူကေ တာ့ ဝေးဝေး ကိုပွေးရှာစရာမလိုပါဘူး။ သငျ့နဲ့သိကြှမျးပွီးသားသူပါ။သငျ့ကိုယျသငျနား မလ ညျနိုငျနတေဲ့ အခြိနျမှာတောငျ သငျ့ကို နားလညျနိုငျသူတဈယောကျနဲ့ဆုံရမှာပါ။
(၉) Sagittarius (ဓနုရာသီဖှား– နိုဝငျဘာ ၂၂ မှ ဒီဇငျဘာ ၂၁)
ခရီးသှားရငျးဆုံရမှာပါ။တဈခါမှမရောကျဖူးတဲ့နရောကို သှားရငျး တစိမျးတဈေ ယာကျကို ခပျမွနျမွနျ ခဈြမိသှားမှာပါ။သငျတို့နှဈယောကျအ ကွား ခွားနားမှုေ တှရှိနတောကို သိနပေမေယျ့လညျး ရအောငျကွိုးစားကြျောလှားပွီး ခဈြမိ သှားပါလိမျ့မယျ။
(၁ဝ) Capricorn (မကာရရာသီဖှား– ဒီဇငျဘာ ၂၂ မှ ဇနျနဝါရီ ၁၉ )
အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးနဲ့ဒိတျလုပျတာတှကေို ရပျခငျြနပွေီး မကွာခငျမှာပဲ အဲ့ဒီလို လုပျဖို့ ဆန်ဒရှိနပေါတယျ။
(၁၁) Aquarius (ကုံရာသီဖှား– ဇနျနဝါရီ ၂ဝ မှ ဖဖေျောဝါရီ ၁၈)
လှတျလပျမှုကို မွတျနိုးတဲ့သငျ့အနနေဲ့ Single ဘဝကို လုံးဝစှနျ့လှတျခငျြတဲ့ အထိဖွဈလာအောငျ လုပျပေးမယျ့ သူနဲ့ ဆုံဆညျးရမှာပါ။အလုပျ(ဒါမှမဟုတျ) သငျဝါသနာပါရာတဈခုခုကို အကွောငျးပွုပွီး သူနဲ့ဆုံဆညျးရမှာပါ။ရညျရှယျ ခကျြွ ခငျးတူ၊Career Life ခငျြးလညျးတူမယျ့ သူမြိုးပါ။စိတျတူ၊ကိုယျတူ သငျတို့ နှဈေ ယာကျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အတူအားပေးရငျး ပြျော ရာကောငျးတဲ့ အခဈြဇာတျလမျးဖွဈလာမှာပါ။
(၁၂) Pisces (မိနျရာသီဖှား– ဖဖေျေါဝါရီ ၁၉ မှ မတျလ ၂ဝ )
စိတျခံစားခကျြပွငျးသူ၊ခံစားခကျြတှကေို မထိခိုကျစတေဲ့ သူမြိုးနဲ့ဆုံမှာပါ။သငျတို့ရဲ့ ခဈြဇာတျလမျးကတော့ စာအုပျတဈအုပျ၊၀တ်ထုတဈပုဒျလို ဖွဈလာမှာပါ။သငျ မွ ကာ ခ ဏ မွငျတှနေ့ကေသြူမြိုးဖွဈပမေယျ့ မကျြလုံးလြှံပွီး ကြျောကြျောသှားတတျ တဲ့သူမြိုးပါ။တဈယောကျနဲ့တဈယောကျမသိပဲ ဘာလို့မြားနမေိခဲ့ကွတာ လိမျ့လို့ တှေးမိလောကျမယျ့သူမြိုးပါ။
သွားပုံစံလေးတွေက ပြောနေသော သင့်အကြောင်း
ဖတျမရသူတှေ အောကျတှငျ Unicode version ဖွငျ့ရေးပေးထားသညျ
၁။ သင့်သွားလေးတွေက စတုရန်းပုံ ညီညီလေး ဆိုရင်
သင်က တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နေတတ်ပြီး ငွေကြေး စုဆောင်းတတ်တဲ့ လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ရမလဲ ဆိုတာကိုလည်း ကျွမ်းကျင် ပါတယ်။ သင်က လိမ္မာပါးနပ်တဲ့ သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ရည်မှန်းချက်ကြီးပြီး တတ်ပြီး စီးပွားရေးအတွက်ဆိုလည်း စွန့်စားရဲတဲ့ သူတစ်ယောက် ဖြစ်တယ်။
ဗေဒင်ဝါသနာအိုး Page မှတင်ဆက်သည်
၂။ သင့်သွားလေးတွေက ဘဲဥပုံစံလေးဆိုရင်
သင်က အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်ပြီး အနုပညာဘက်မှာ ထူးချွန်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်က အရှက်ကြီးသလို စိတ်ထိခိုက်လွယ်ပြီး စိတ်အားငယ်တတ်တဲ့ သူမျိုးလည်း ဖြစ်တယ်။
၃။ သင့်သွားလေးတွေက တြိဂံ ပုံစံလေးဆိုရင်
သင်က လူတိုင်းအပေါ်မှာ အကောင်းမြင်တတ်ပြီး တက်တက်ကြွကြွ ရှိတဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင်က လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေတတ်တဲ့သူ ၊ စကားပြော ကောင်းတဲ့သူ၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့သူ၊ ပြီးတော့ အကြံကောင်း ဥာဏ်ကောင်းတွေ အမြဲ တွေးတတ်တဲ့သူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ သင့်သွားလေးတွေက ထောင့်မှန်စတုဂံ ပုံစံလေးဆိုရင်
သင်က စိတ်ဆိုးလွယ်ပြီး သန်မာထွားကြိုင်းတဲ့ လူမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ သင်က ရည်မှန်းချက် ကြီးမားပေမယ့် သင့်ရည်မှန်းချက်တွေက ခဏခဏ ပြောင်းနေတတ်ပါတယ်။ သင်က အစီအစဉ်တွေ ဆွဲပြီး အလုပ်လုပ်ရတာကို ကြိုက်သလို သင့်အစီအစဉ်တွေအတိုင်း လက်တွေ့လုပ်ကိုင်တတ်တဲ့ သူလည်း ဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့ သင်က သင့်ပြဿနာတွေကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ရအောင် ဖြေရှင်းတတ်တယ်။
၁။ သငျ့သှားလေးတှကေ စတုရနျးပုံ ညီညီလေး ဆိုရငျ
သငျက တညျတညျငွိမျငွိမျ နတေတျပွီး ငှကွေေး စုဆောငျးတတျတဲ့ လူမြိုးဖွဈပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ဘယျလိုထိနျးခြုပျရမလဲ ဆိုတာကိုလညျး ကြှမျးကငျြ ပါတယျ။ သငျက လိမ်မာပါးနပျတဲ့ သူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ ရညျမှနျးခကျြကွီးပွီး တတျပွီး စီးပှားရေးအတှကျဆိုလညျး စှနျ့စားရဲတဲ့ သူတဈယောကျ ဖွဈတယျ။
ဗဒေငျဝါသနာအိုး Page မှတငျဆကျသညျ
၂။ သငျ့သှားလေးတှကေ ဘဲဥပုံစံလေးဆိုရငျ
သငျက အဖှဲ့အစညျးနဲ့ အလုပျလုပျတဲ့နရောမှာ ကြှမျးကငျြပွီး အနုပညာဘကျမှာ ထူးခြှနျတဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ သငျက အရှကျကွီးသလို စိတျထိခိုကျလှယျပွီး စိတျအားငယျတတျတဲ့ သူမြိုးလညျး ဖွဈတယျ။
၃။ သငျ့သှားလေးတှကေ တွိဂံ ပုံစံလေးဆိုရငျ
သငျက လူတိုငျးအပျေါမှာ အကောငျးမွငျတတျပွီး တကျတကျကွှကွှ ရှိတဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။ သငျက လှတျလှတျလပျလပျ နတေတျတဲ့သူ ၊ စကားပွော ကောငျးတဲ့သူ၊ စိတျကူးယဉျဆနျတဲ့သူ၊ ပွီးတော့ အကွံကောငျး ဉာဏျကောငျးတှေ အမွဲ တှေးတတျတဲ့သူပဲ ဖွဈပါတယျ။
၄။ သငျ့သှားလေးတှကေ ထောငျ့မှနျစတုဂံ ပုံစံလေးဆိုရငျ
သငျက စိတျဆိုးလှယျပွီး သနျမာထှားကွိုငျးတဲ့ လူမြိုး ဖွဈပါတယျ။ သငျက ရညျမှနျးခကျြ ကွီးမားပမေယျ့ သငျ့ရညျမှနျးခကျြတှကေ ခဏခဏ ပွောငျးနတေတျပါတယျ။ သငျက အစီအစဉျတှေ ဆှဲပွီး အလုပျလုပျရတာကို ကွိုကျသလို သငျ့အစီအစဉျတှအေတိုငျး လကျတှလေု့ပျကိုငျတတျတဲ့ သူလညျး ဖွဈတယျ။ ပွီးတော့ သငျက သငျ့ပွဿနာတှကေို ကိုယျတိုငျပဲ ရအောငျ ဖွရှေငျးတတျတယျ။
သင့်ရဲ့ လက်ဖဝါးပြင်မှာ ” M”လက္ခဏာ ပုံစံလေး ပါမယ် ဆိုရင်တော့….!
( Pls Read under unicode version )
သင့် ရဲ့ လက်ဖဝါးပြင်မှာ ကြည့်လိုက်ပါ။ အသက်လမ်းကြောင်း၊ ပညာရေး လမ်းကြောင်း၊ နှင်
နှလုံးလမ်းကြောင်းက ဆက်ဆက်နေပြီးတော့ “M” ပုံစံလေး ပါနေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့
ဒီလို လူမျိုးတွေက ကိုယ့် ဒူးကိုယ်ချွန်လူမျိုးဖြစ်ပြီး အလုပ်အကိုင်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြတယ်။
တစ်ကိုယ်သမားစိတ်ဓာတ်မရှိပဲ အောက်လက်ငယ်သားတွေကိုလက်တွဲ ခေါ်တက်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် နေရာတစ်ခုမှာအကြီးအကဲဖြစ်တက်တယ်။ သနားကြင်နာတက်သော လူမျိုးဖြစ်ပြီး စွန့်ဦး တီထွင်တက်သူတွေလည်း ဖြစ်တက်ပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲမှု့ကောင်းမွန်ပြီး နာမည်ကောင်းများလည်း ကျန်ရစ်နေမဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ အဓိက ထူးခြားချက်ကတော့ တစ်ဖက်လူကို ခန့်မှန်းနိုင်တာပါပဲ။ တစ်ဖက်လူ လိမ်ညာ
စကားပြောဆိုနေရင်ဖြစ်ဖြစ် အလို လို သိနေတက်ကြတယ်။ သူတို့ရှေ့မှာ ဟန်ဆောင်လို့
မရနိုင်ပါဘူး။ ပါးနပ်ကြတယ်။ ဒီလို အချက်တွေကို အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေက ပိုမို
ခန့်မှန်းနိုင်ကြတယ်။ ဒါကတော့ သူများနဲ့ မတူတဲ့ အားသာချက်တစ်ခုပါ။
ကျန်တာတွေကတော့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီသတယ်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝနိုင်တယ်။ အသိပညာ
အတက်ပညာတွေလည်း ဘဝမှာ ကြွယ်ဝနေနိုင်ပါတယ်။
သငျ့ရဲ့ လကျဖဝါးပွငျမှာ ” M”လက်ခဏာ ပုံစံလေး ပါမယျ ဆိုရငျတော့….!
သငျ့ ရဲ့ လကျဖဝါးပွငျမှာ ကွညျ့လိုကျပါ။ အသကျလမျးကွောငျး၊ ပညာရေး လမျးကွောငျး၊ နှငျ
နှလုံးလမျးကွောငျးက ဆကျဆကျနပွေီးတော့ “M” ပုံစံလေး ပါနမေယျဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့
ဒီလို လူမြိုးတှကေ ကိုယျ့ ဒူးကိုယျခြှနျလူမြိုးဖွဈပွီး အလုပျအကိုငျကို ကွိုးစားလုပျကိုငျကွတယျ။
တဈကိုယျသမားစိတျဓာတျမရှိပဲ အောကျလကျငယျသားတှကေိုလကျတှဲ ချေါတကျတဲ့သူမြိုးဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ နရောတဈခုမှာအကွီးအကဲဖွဈတကျတယျ။ သနားကွငျနာတကျသော လူမြိုးဖွဈပွီး စှနျ့ဦး တီထှငျတကျသူတှလေညျး ဖွဈတကျပါတယျ။ စီမံခနျ့ခှဲမှု့ကောငျးမှနျပွီး နာမညျကောငျးမြားလညျး ကနျြရဈနမေဲ့သူလညျးဖွဈပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ အဓိက ထူးခွားခကျြကတော့ တဈဖကျလူကို ခနျ့မှနျးနိုငျတာပါပဲ။ တဈဖကျလူ လိမျညာ
စကားပွောဆိုနရေငျဖွဈဖွဈ အလို လို သိနတေကျကွတယျ။ သူတို့ရှမှေ့ာ ဟနျဆောငျလို့
မရနိုငျပါဘူး။ ပါးနပျကွတယျ။ ဒီလို အခကျြတှကေို အမြိုးသားတှထေကျ အမြိုးသမီးတှကေ ပိုမို
ခနျ့မှနျးနိုငျကွတယျ။ ဒါကတော့ သူမြားနဲ့ မတူတဲ့ အားသာခကျြတဈခုပါ။
ကနျြတာတှကေတော့ ခေါငျးဆောငျကောငျးပီသတယျ။ ခမျြးသာကွှယျဝနိုငျတယျ။ အသိပညာ
အတကျပညာတှလေညျး ဘဝမှာ ကွှယျဝနနေိုငျပါတယျ။
လက်စွပ် ဝတ်ထားတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေးတွေပါ
Please read unicode version below.
~~ လက်သန်း ဆိုရင်~~
သင်ဟာ အိမ်ထောင်မပြုတော့ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ
~~ လက်သူကြွယ် ဆိုရင်~~
သင်ဟာ လက်ထပ်ပြီးပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ ~~
ညာ ဘက် လက် အတွက်
~~လက်ညိုးမှာ ဆိုရင်တော့ ~~
အဲဒီတော့ကိုယ့် လက်စွပ်လေးတွေက ကိုယ့်အကြောင်းကို ဖော်ပြနေတက်တယ်တဲ့ ကြည့်ဝတ်ကြပါ သမီးတို့ရေ
လကျစှပျ ဝတျထားတဲ့ အဓိပ်ပါယျလေးတှပေါ
~~ လကျသနျး ဆိုရငျ~~
သငျဟာ အိမျထောငျမပွုတော့ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျပါ
~~ လကျသူကွှယျ ဆိုရငျ~~
သငျဟာ လကျထပျပွီးပွီဆိုတဲ့ အဓိပ်ပါယျပါ ~~
ညာ ဘကျ လကျ အတှကျ
~~လကျညိုးမှာ ဆိုရငျတော့ ~~
အဲဒီတော့ကိုယျ့ လကျစှပျလေးတှကေ ကိုယျ့အကွောငျးကို ဖျောပွနတေကျတယျတဲ့ ကွညျ့ဝတျကွပါ သမီးတို့ရေ